Rehefa Oktôbra, feno vorona mpifindra toerana ny lanitr’i Kôlômbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2019 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Español
Fifindran-toeran'ny vorona, sary tao amin'ny Wikipedia, nampiasàna lisansa CC by 2.0
Mandritra ny volana Oktôbra, toerana itazanana seho iray goavana ny lanitr'i Kôlômbia noho ny fifindran-toeran'ireo vorona marobe toy ny ankoay (FR) sy ny voromahery (FR). Tsy tara amin'izany tranga izany ny habaky ny aterineto.
Tamin'ny 2013, ohatra, betsaka ireo famoahana tsinjo, toy ilay lahatsary iray ao amin'ny Youtube an'i SebasNavarroColumbus, miresaka ny fifindran-toeran'ny vorona teny amin'ny lanitr'i Medellin.
Tamin'ny 2014, Juan Felipe Duque (@JuanFelipeDuque) (ES) sy ireo hafa mpampiasa aterineto, dia nanamafy fa nahita karazana iray tsy mbola fantatra nipetraka teo amin'ny toeramponenan'ny mpianatra misy an-dry zareo.
#AvesMigratorias androany no nahitako an-dry zareo ireto. Tsy haiko ny anarany, sambany no nahitako azy ireo tety anatin'ny faritry ny anjerimanontolo advantista.
— Juan Felipe Duque N. (@JuanFelipeDuque) 22 Oktôbra 2014
Salomón Romero (@SalomonRomero) (ES) nalahelo satria na nahita ireo voromahery aza dia tsy mba afaka naka sary akory.
@elcolombiano Tao Santa Fé de Antioquia, nahita voromahery vitsivitsy aho nipetraka teny amin'ny arabe, saingy indrisy fa tsy mba naka sary . #AvesMigratorias
— Salomón (@SalomonRomero) 20 Oktôbra 2014
Raha tao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny tranonkala Dodo.com kosa, nisy namoaka ny sarin'ilay karazana antsoina mahazatra hoe “tijereta” (ES) (mpamantsika sofina):
@EFTA_birdday, “Tyrannus savana” iray sy famintinana ny làlana vita omaly #AvesMigratorias http://t.co/sUZ39ZGF0z pic.twitter.com/TKqYE25NC5
— dodo Colombia (@dodo_Colombia) 19 Oktôbra 2014
Araka ny lazain'ny Wikipedia (FR), anaty andiany karazam-borona sasantsasany (ES) avy any Etazonia ireo vorona mandalo ao Kôlômbia rehefa volana Oktôbra. Mandositra ny ririnina izy ireo ary midina mamonjy ny zanapehintany, any amin'ireo firenena toa an'i Kôlômbia, Ekoatora, Però ary hatrany Arzantina mihitsy aza.
Ao Kôlômbia, ny anjerimanontolo ICESI dia namorona ny Wiki Aves de Colombia (ES) toerana iray ahafahana mahita ireo karazana marobe arahana torohay – ny anarana siantifika, ny sarintany, fitsinjarazaràny ary ny fotoana ahafahana mijery azy ireny any Kôlômbia. Fotoana vitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra iray tao amin'ny Kunfur (ES) ny Global Voices), fampiharana iray narafitra mba hijerena ireo vorona no sady fitarihan-dia afaka nanaporofo ny maha-ilaina azy nandritra ireny tranga mahakasika ny haivorona ireny.